All Nepali Sources |
BBC Nepali Sewa |
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 04:25:05
अनलाइनखबरमा सोमबार एउटा ब्लग आएको रहेछ, धीरकुमार श्रेष्ठजीले लेख्नुभएको । उहाँको ब्लगको शीर्षक छ, ‘वर्किङ भिसामा हजुर, वर्किङ भिसामा !‘ यो शीर्षक हेरेपछि प्रष्ट बुझिन्छ, यस आलेखसँग हाम्रो गीत ‘भिजिट भिसामा’को केही न केही नाता/साइनो छ । पढ्दै गएँ, नभन्दै त्यो हाम्रो गीतकै सेरोफेरोमा लेखिएको ब्लग रहेछ । हाम्रो फिल्म ‘दाल भात तरकारी’मा समावेश गीतप्रति, […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 04:25:04
रुखो पाखोमा पूर्वमन्त्रीको ड्रागन खेती
६ चैत, लमही । तुलसीपुर–घोराही सडक खण्डसँग सटेको जग्गा । वर्षौंदेखि बाँझो । त्यही जग्गामा अहिले फलामका खाँबा गाडिएका छन् । ती खाँबासँगै भर्खरै बिरुवा रोपिएका छन् । झट्ट हेर्दा जो कोहीलाई अनौठो लाग्न सक्छ, त्यसमा पनि पूर्वमन्त्री लोकेन्द्र बिष्ट मगर फरुवा समाएर खनिरहेको भेटिन्छन् । पूर्वमन्त्री मगरले दाङ तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नं १८ मा […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 04:10:04
फागुमा रमेको काठमाडौं (फोटोफिचर)
६ चैत, काठमाडौं । सिंगै देश यतिबेला फागु पूर्णिमाको रौनकमा डुबुल्की मारिरहेको छ । बुधबार मध्यान्नमा काठमाडौंका विभिन्न भाग घुम्दा यो पर्वको उत्कर्ष देखिन्थ्यो । पर्यटकीय क्षेत्रका रुपमा रहेको बसन्तपूर अथाह भिड जम्मा भएर फागु पूर्णिमा मनाइरहेको छ । भीडमा अधिकांश युवावयका व्यक्तिहरु छन् । धेरैले एकैनासको टिसर्ट लगाएका छन् भने कतिपयले अनुहार पेन्ट गरेका छन् […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 03:40:05
अनुहार होइन, मन रङ्ग्याउँ !
“आउ प्रिय हामी मिलेर खेलौ होली भरिदिन्छु तिम्रो म मायाको झोली जे जे गर्नु छ आजै समय छँदै गरौँ कसले देखेको छ र के हुन्छ भोलि ।” चितवनका नीलम भुसालको मुक्तकमा भनिएझैँ होली पर्व आधुनिकतासहित रङ्ग र सद्भावको उत्सवमा मिसिएको छ । परम्परागत मान्यताबाट शुरु भएको फागु पूर्णिमाका अवसरमा आज एकापसमा रङ्ग लगाउने, सद्भाव […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 03:25:05
६ चैत, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाले धर्मसँगै संघीयता र गणतन्त्रबारे समेत जनमत संग्रह गर्न आफ्नो पार्टी तयार रेहेको बताएका छन् । हिन्दु धर्मको वकालत गर्दै आएका कोइरालाले लामो समयदेखि धर्मबारे जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । बुधबार टोखास्थित आफ्नै निवासमा होलीको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा कोइरालाले धर्मबारे जनमत संग्रहको वकालत […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 03:10:04
कांग्रेस नेताको ठहर : विप्लवमाथिको प्रतिवन्धले प्रहरी नै आतंकित भए
६ चैत, काठमाडौं । ०५२ सालमा सुरु भएको माओवादी विद्रोहको शान्तिपूर्ण अवतरण भएको १३ वर्ष भइसक्दा पनि द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरु अझै टुंगिएका छैनन् । त्यसका लागि सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेका बेला सरकारले विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि आम मानिसले फेरि अर्को द्वन्द्व सुरु हुन लागेको हो भन्ने प्रश्न गरिरहेका छन् । यद्यपि कतिपयले प्रतिबन्ध ठीक […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 02:35:05
मेडिकल कलेजको श्रम शोषणमा नर्स, मासिक तलब पाँच हजार !
६ चैत, चितवन । चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजले इन्टर्ननसीपका नाममा नर्सहरुको श्रम शोषण गर्दै आएको छ । नर्सिङ काउन्सिलको परीक्षा पास गरेका नर्सहरुलाई मासिक पाँच हजार रुपैयाँमा काम लगाउने कामको नेतृत्व कलेजकी नर्सिङ विभाग प्रमुख सीता पराजुलीले गरेकी छन् । सरकारले कामदारको न्यूनतम ज्याला १३ हजार ४५० तोकेको छ । तर, चितवनको पुरानो मेडिकल कलेजले […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 02:20:05
अजितको सफलतालाई केन्द्र सरकारले महत्व नदिएको परिवारको गुनासो
६ चैत, जनकपुरधाम । तेस्रो एसियाली युथ एथलेटिक्स प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक जितेका अजितकुमार यादवको परिवार सरकारसँग असन्तुष्ट देखिएको छ । केन्द्र सरकारले आफ्नो छोराको सफलतालाई महत्व नदिएको अजितका पिता पवन यादवले गुनासो गरेका छन् । यादवले भने, ‘यसअघि विदेशमा राम्रो खेलेर आउने खेलाडीलाई प्रधानमन्त्री, खेलकुदमन्त्रीसहित सबैले भेट्ने गरेका थिए । तर, खोई अहिलेसम्म मेरो छोरालाई […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 02:05:04
प्रचण्डको अमेरिका यात्रा : न भव्य स्वागत, न विरोध
६ चैत, काठमाडौं । पत्नी सीता दाहालको उपचारका लागि अमेरिकाको बाल्टिमोर पुगेका नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । प्रचण्डविरुद्ध तिलकबहादुर श्रेष्ठ नाम गरेका एक व्यक्तिले फेडरल ब्युरो अफ इन्भेस्टिगेसन (एफबीआई) मा इमेल पठाएको अनाधिकृत चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको छ । त्यसैमा टेकेर विभिन्न मिडियाले ‘प्रचण्डविरुद्ध एफबीआईमा उजुरी’ भन्ने समाचार बनाएका […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 01:35:05
शिल्पा मास्केको दिनचर्या – घरको सबै काम गर्छु
जीवनलाई यसरी वा यस्तै ढंगले जिउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन । म आफ्नै ढंग र मर्जी अनुसार जीवन विताउँछु । त्यसैले कतिबेला सुत्ने, कतिबेला उठ्ने, के खाने भन्ने नियमित तालिका छैन । आज जस्तो दिनचर्या हुन्छ, भोलि त्यो भन्दा फरक हुनसक्छ । अझ फिल्ममा काम गर्न थालेपछि मेरो दैनिकी थप अस्तव्यस्त हुन्छ । सामान्य अवस्थामा चाँहि म साढे […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 01:20:03
होलीको दिन काठमाडौंमा ५ महिलासहित १९४ जना पक्राउ
६ चैत, काठमाडौं । बुधबार मनाइएको होली पर्वमा उछृङ्खल गतिविधि गरेको आरोपमा प्रहरीले काठमाडौंबाट १ सय ९४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । राजधानीको दरबारमार्ग, ठमेल, वसन्तपुर, भृकुटीमण्डप, महाराजगञ्ज, नयाँ बानेश्वर लगायतको क्षेत्रबाट उनीहरुलाई पक्राउ गरिएको हो । काठमाडौं प्रहरी परिसर, टेकुका डीएसपी होविन्द्र बोगटीले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार पक्राउ पर्नेमा ५ जना महिला पनि छन् […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 00:50:04
पोखरामा विदेशीसँग यसरी मनाइयो होली (फोटो फिचर)
६ चैत, पोखरा । रंगहरुको पर्व फागु पूर्णिमा (होली) पोखरामा भव्य रुपले मनाइएको छ । पोखराको विभिन्न ठाउँबाट होली खेल्दै अधिकांश युवायुवतीहरु पोखराको लेकसाइडमा होली खेल्न पुगेका थिए । सडक किनारमा युवायुवतीहरु एक आपसमा रंग दल्दै होलीको शुभकामना समेत आदान प्रदान गरेका थिए । गत वर्ष झैँ लेकसाइडमा स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई सामुहिक होली खेल्ने […]
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-21 00:35:05
फिनल्याण्ड संसारकै खुशी देश, नेपाल सय औं स्थानमा
६ चैत, काठमाडौं । नेपाल विश्वमा १०० औं खुशी हुने देशमा परेको छ । बुधबार सार्वजनिक वल्र्ड हेप्पीनेस रिर्पोट अनुसार १५६ देश मध्ये नेपालीहरू १०० औं स्थानमा परेको हो । अघिल्लो वर्ष नेपाल १०१ स्थानमा थियो । त्यतिबेला ४.८८ अंक पाएको नेपालले यो वर्ष ४.९१ अंक प्राप्त गरेको छ । प्रतिवेदन अनुसार विगत बाह्र वर्षमा […]
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 23:36:54
जितपुर । सरकारले अराजनीतिक समूह भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको नेकपा नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहका कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिने जनाएसँगै कपिलवस्तुबाट पनि जिल्लास्तरका नेताहरु पक्राउ परेका छन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कपिलवस्तुका प्रहरी उपरीक्षक अच्युतमप्रसाद पुडासैनीका अनुसार जिल्लाबाट चार जना नेतालाई नियन्त्रणमा लिएको बताए । यसरी पक्राउ हुनेमा जिल्ला नेतामा...
Posted by: Setopati 2019-03-20 23:21:21
होलीको रंगमा झुम्यो काठमाडौं (तस्बिरहरू)
बुधबार काठमाडौं उपत्यकासहित मुलुकका पहाडी जिल्लामा धुम धामका साथ होलीमा झुमेको छ। पर्यटकीय क्षेत्रका रूपमा रहेको बसन्तपुरमा बुधबार दिउँसो बाक्लो मात्रामा युवाको भीड जम्मा भएर फागु पूर्णिमा मनाइरहेको थियो। भीडमा अधिकांश युवावयका व्यक्तिहरु छन् । धेरैले एकैनासको टिसर्ट लगाएका थिए भने कतिपयले अनुहार पेन्ट गरेका थिए । नाचगानमा मस्त उत्सव मनाइरहेका थिए। आपसमा रंग दलादल र पानी छ्यापाछ्याप गरिरहेका युवायुवतीलाई केही विदेशी पर्यटकले पनि साथ दिएका थिए। बसन्तपुरका साथसाथै टुँडिखेल, दरबारमार्ग, रत्नपार्क बानेश्वर, पुल्चोक, जावलाखेल, पाटनलगायत मुख्य चोकहरुमा पनि फागु पूर्णिमाको अत्यधिक चहलपहल देख
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 22:56:53
बाँके । जिल्लास्थित सुरक्षा निकायले अवैध हतियारबारे सोधखोज गरिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हतियार राख्न इजाजत लिएका व्यक्तिसँग सोधखोज गर्दै पटकपटक नवीरकणका लागि सूचना जारी गर्दै आएको छ । बाँकेमा हालसम्म दर्ता भएका विभिन्न किसिमका हतियारमध्ये ६०३ नवीकरण भएका छन् । अझै १९५ थान नवीकरण हुन बाँकी रहेको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताउनुभयो । इजाजत...
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 22:36:49
काठमाडौं । नेपाल प्रहरीले सामाजिक सञ्जालमा अमर्यादित तथा अश्लील कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तीन जनालाई पक्राउ गरेको छ । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँको टोलीले युटुब च्यानलमार्फत अश्लिल सामग्री प्रसारण गर्ने फुल्चोकी मिडिया गुप्रका सञ्चालक राजकुमार कुँवर, कार्यक्रम सञ्चालिका लक्ष्मी मोक्तान र अन्तवार्ता दिने मोडल परी तामाङलाई मङ्गलबार कलंकीबाट पक्राउ गरेको हो...
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 22:31:50
गलकोट । देशभर होलीको रौनक छाइ, युवायुवती ‘ह्यापी होली-ह्याप्पी होली’ भरिहेका बेला बागलुङ सदरमुकाम बागलुङ बजारमा ३०० वर्ष पुरानो फागु गीत गाउँदा छुट्टै रौनकता छायो । मजाको फागुन जानै मा लाग्यो, धड्कन लाग्यो छाती हो।।।। औँला काटी कलम बनावे रगतके मसिया बनावे।।। यै हो।।।। हाय हाय रगत के मसिया बनावे सखियाँ । धड्कन लाग्यो छाती हो।।।। मजाको फागुन जानैमा लाग्यो, धड्कन...
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-20 22:15:05
प्रधानमन्त्री चढेको विमान होल्ड छानविनः एटीसीको कान जाँच्न निर्देशन
६ चैत, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओली सवार विमान होल्डमा राखिएको विषयमा छानविन गर्न गठित समितिले त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलमा कार्यरत एयर ट्राफिक कन्ट्रोलर (एटीसी) को कान जाँच्नुपर्ने रायसहित प्रतिवेदन दिएको छ । केही दिनअघि गृहजिल्ला गएका प्रधानमन्त्री ओली भद्रपुर विमानस्थलबाट काठमाडौं आउँदा चढेको यति एयरलाइन्सको विकमान झण्डै ७ मिनेट होल्डमा परेको थियो । त्यसबारे छानविन […]
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 22:07:01
जाकार्ता । इन्डोनेसियाको पपुवा प्रान्तमा आएको बाढी पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या १०७ पुगेको छ । अधिकारीहरूले बुधबार दिएको जानकारी अनुसार बेपत्ता हुनेहरूको संख्या धेरै नै रहेकाले मृत्यु हुनेहरूको संख्या अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको बताएका छन् । उनीहरूका अनुसार अहिले सम्म बेपत्ता हुनेहरूको संख्या ९३ रहेको छ । उनीहरूको अझै खोजी तथा उद्धारको प्रयास भइरहेको...
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 21:46:45
काबुल । द्वन्द्वग्रस्त अफगानिस्तानमा ढिला गरी राष्ट्रपतिय निर्वाचन हुन लागेको छ । राष्ट्रपतिय निर्वाचन आगामी सेप्टेम्बर २८ तारिखका दिन गर्नेगरी बुधबार औपचारिक रूपमा घोषणा भएको छ । यसअघि तय भएको तालिका भन्दा पाँच महिना पछाडी सारेर निर्वाचन गर्ने घोषणा भएको हो । स्वतन्त्र निर्वाचन आयोग ९आइइसी०ले निर्वाचनको वातावरण बनाउन र निर्वाचनका लागि आवश्यक तयारी पुरा गर्न...
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-20 21:10:03
बागदरबार भत्काउने विद्यासुन्दरको निर्णय सर्बोच्चद्वारा खारेज
६ चैत, काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले भूकम्पमा क्षति पुगेको बागदरबार भत्काएर नयाँ भवन बनाउने काठमाडौं महानगरको निर्णयलाई बदर गरेको छ । सर्बोच्चले मंगलबार जारी गरेको परमादेशमा महानगरले भवन भत्काउन दिएको ठेक्का पनि उत्प्रेषणको आदेशमार्फत बदर गरेको हो । महानगरसँग बागरदबारको भोगचलनको मात्रै अधिार रहेको र स्वामित्व नरहेको भन्दै सर्बोच्चले यस्तो फैसला गरेको हो । वरिष्ठ […]
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 21:06:45
चीर स्वायगू घुमाउँदै होलीको विदाई
भक्तपुर । भीमसेनको लिंगको प्रतीकका रुपमा रहेको काठको लिंगलाई काँधमा बोकेर ब्रह्मायणी पुर्‍याई फागुन शुक्ल अष्टमीको दिनदेखि भक्तपुरमा शुरु भएको फागु अर्थात् होली पर्व बुधबार साँझबाट सम्पन्न भएको छ । भीमसेन गुठीका गायजुले भीमसेन मन्दिरको पाटीमा बसेर अष्टमीदेखि आज पूर्णिमासम्म ‘भीमसेन देया लज खङ्गलो वानला ल्यासे, बिस्यूवाने म्वायक सो झायला’ अर्थात् ‘भीमसेनको...
Posted by: OnlineKhabar 2019-03-20 20:55:04
६ चैत, काठमाडौं । महानगरीय प्रहरी वृत्त, बानेश्वरले बुधबार मनाइएको होली पर्वमा उछृंखल गतिविधि गरेको आरोपमा २६ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा जबरजस्ती रंग दल्नेदेखि खुकुरी र ढुंगा हानाहान गर्नेसम्म छन् । बानेश्वरका प्रहरी प्रमुख नायब उपरीक्षक (डीएसपी) गोविन्दराज काफ्लेले अनलाइनखबरलाई दिएको जानकारी अनुसार बानेश्वरको एक क्याफेमा बसेर झगडा गर्ने सौगात केसी र […]
Posted by: Baahrakhari 2019-03-20 20:21:44
पोखरा । रोटरीयन स्व कृष्ण थापाको स्मृतिमा रोट्रयाक्ट क्लवअफपोखरा मिडटाउनले फुटसल प्रतियोगिताको आयोजनागर्ने भएको छ । रोटरी, रोट्रयाक्ट र ईन र ह्विलक्लवहरु बीचको भातृत्व विकास गर्ने हेतुले प्रत्येक वर्ष यो प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आईरहेको छ । प्रतियोगिता चैत ९ गते शनिबार हुनेछ भने सहभागीहुनचाहने क्लवहरुले शुक्रबार साँझ ५ बजेसम्म टिम दर्ता गराउन सक्नेछन् ।...
Read all the news from different sources at
Online Learning Community. Visit HamroPathshala for educational resources (syllabus, articles, questions and answers, etc)